Landela inqubekela phambili yeCoronavirus emhlabeni wonke ngesikhathi sangempela | Izindaba zamagajethi
Landela inqubekela phambili yeCoronavirus emhlabeni wonke ngesikhathi sangempela
Ngeshwa, akuyona yonke into ehlala iyizindaba ezinhle, kulokhu ubhadane oluyingozi lwenzeka luvela e-Asia ngenxa yeCoronavirus. Kodwa-ke, kufanele sisebenzise iqiniso lokuthi sisenkathini yezokuxhumana ngocingo ukuvumela ukusabalaliswa kwemininingwane esheshayo nephumelelayo emhlabeni wonke. Ngenxa ye-intanethi, singafunda izindlela ezisebenza kangcono ukugwema ukutheleleka futhi ngaphezu kwakho konke, ukuqapha inqubekela phambili yeCoronavirus, igciwane elingaziwa elivele lithinta abantu abangaphezu kwenkulungwane. Thola ukuthi ungayilandelela kanjani inqubekela phambili ye-Wuhan Coronavirus ngesikhathi sangempela ngemephu exhumanayo.
1 Iyini iCoronavirus?
2 Imephu yesikhathi sangempela seCoronavirus
3 Iyini imbangela ye-Wuhan Coronavirus?
4 Ngabe ulwa kanjani ne-Wuhan Coronavirus?
Kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi yini esibhekene nayo ukuze sisebenzise izinsizakusebenza futhi sibe namathuba okusinda. ICoronavirus akulona igama layo elifanele, kepha, njengoba sibhekene negciwane elisha, okungekho amarekhodi kulo, kusetshenziswa i-typology noma okuhlukile kwezokwelapha okwaziwa ngakho. Ngokuyinhloko iCoronavirus uhlobo lwegciwane eliqukethe i-RNA (Ribonucleic Acid), okuthi uma ithelela ophethe lona ligcine lihlanganisa i-RNA kumaseli ophethe ngezindlela ezihlukile.
Kanye, iguqula leyo RNA ibe yi-DNA futhi ihlangane ne-genome yenethiwekhi. Yilapho i-Coronavirus isebenzisa ithuba leseli elisingathiwe ukuziphindaphinda ngokungalawuleki futhi idale izinhlayiya ezintsha zegciwane, ishiye iseli eliyondlayo futhi liphindaphindeka liphindaphinda ububanzi balo besenzo. Ngakho-ke, kujwayelekile ukuthi amaCoronavirus agcine ngokuguquka njalo, aqubule igciwane elihlukile kulelo lokuqala, futhi yingakho okwenza kube ubhadane oluyingozi, ngoba kungenzeka ukuthi ukwenziwa kwemithi yokugoma kugcina emasakeni aphukile ngenxa kulezi zinguquko njalo.
Imephu yesikhathi sangempela seCoronavirus
Amamephu ahlukahlukene asebenzisanayo asivumela ukuthi sazi ukuqhubeka okuqhubekayo kweCoronavirus emhlabeni wonke. Noma kunjalo, Leli gciwane okwamanje lilawulwa eChina, ngoba kulapho amacala angama-99% enzeke khona, ngokuba yilabo abatheleleke kwamanye amazwe njenge-United States noma iFrance inani elinganakwa, okwamanje elingadluli isilinganiso sabantu abaphakathi kwabahlanu kuya kwabayishumi, bonke abavela eWuhan noma abebenobudlelwano ngqo nezakhamizi zaseWuhan emasontweni adlule, ngakho-ke, ingqikithi yalo bhubhane ilawulwa kahle okwamanje.
Imephu yokulandela inqubekela phambili yeWuhan Coronavirus ngesikhathi sangempela (LINK)
Le mephu ivuselelwa njalo futhi lisinikeza imininingwane enembile efana nenani labathelelekile, isimo sabo samanje ngisho nemikhakha yabanye balaba abangenwe yileli gciwane, ngoba ihlukanisa phakathi kwabasebenzi bezempilo kanye nezakhamizi. Kodwa-ke, akuyona kuphela inguqulo, siphinde sibe nenye imephu exhumanayo, ehlanganiswe neGoogle Maps futhi esikhombisa nezithombe ngesikhathi sangempela samacala okusolakala ukuthi analeli gciwane, amacala aqinisekisiwe, kanye nokufa okubangelwe. Lawa mabalazwe anezigidi zamahithi namuhla.
I-Google Maps enendawo yalabo abangenwe yi-Wuhan Coronavirus
Iyini imbangela ye-Wuhan Coronavirus?
Okwamanje asikho isizathu esisemthethweni nesicacile, kepha, njengoba i-intanethi ingumbono wemibono yokuthakaselwa, imibono yokuqala iphakamisa ukuthi iWuhan, idolobha laseChina elinabantu abayizigidi eziyi-11, lingaphezulu nje kwendawo elula yase-Asia umdondoshiya. I-Wuhan inepaki lezimboni elibalulekile lapho izinkampani ezibaluleke kakhulu ezithaka imithi kanye ne-biotechnology ezweni zigxile khona, ngenxa yalesi sizathu kuvela ama-hypotheses (angaqinisekisiwe) mayelana nokudalwa kwawo elabhoratri.
Njengoba sesishilo, le mibono engeyona iqiniso futhi ayiqinisekisiwe, okwamanje iChina ayikaze inikeze uhlobo olusemthethweni maqondana nalokhu, futhi akulindelekile, ngoba kuze kube manje lolu hlobo lwesifo lunesizathu salo sokuba semvelweni, ngoba ayikho imfihlakalo njengoba umkhuhlane wonyaka ubungaba nawo, naphezu kokuqina kwezimpawu zawo. Ngakho-ke, Sikumema ukuba "uthathe nezimpintshi" ulwazi nemibono emayelana nemvelaphi ye-coronavirus ukuze unganikeli emphefumulweni omkhulu okhulisa ubuqiniso bayo.
Ngabe ulwa kanjani ne-Wuhan Coronavirus?
Okwamanje uHulumeni we I-China ithathe isinqumo sokunqanda ukushushumbiswa kwabantu emadolobheni aseWuhan Huanggang, Zhijiang, Ezhou, Qiangjiang, Chibi naseXiantao, ukusungula izilawuli zangasese emingceleni yabo nokukhawulela ukuthuthwa komphakathi, okuthinte kakhulu kune Abantu abayi-20.000.000. Kodwa-ke, okwamanje iziphathimandla zamazwe afana neSpain noma i-United States of America azithathi izinyathelo zokuzivikela ezikhethekile ezikhumulweni zezindiza zazo ngaphesheya kwalezo ezenziwa ngendlela ejwayelekile ngezindlela ezejwayelekile zokuphepha.
BUKA: I-video ikhombisa isimo esibhedlela lapho kuqale khona ukuqubuka kwesifo segciwane lengculaza; manje isisusiwe enkundleni yezokuxhumana yaseChina pic.twitter.com/uC5QYY9Z0a
- Izindaba zeBNO (@BNONews) January 24, 2020
Kuvidiyo ephezulu kuyakhonjiswa izithombe zangempela zesibhedlela eWuhanNgalesi sizathu, uHulumeni waseChina ulungiselela ukwakhiwa okucacile kwezibhedlela ezimbili ezinemibhede engaphezu kwe-1.200 ngasinye ukubhekana nalolu bhubhane. Okwamanje awekho amacala aqinisekisiwe weCoronavirus eSpain. Kumele sikhumbule ukuthi igciwane lithinta kakhulu abantu abaneminyaka engaphezu kwengama-60, abesifazane abakhulelwe, izingane kanye nabantu abanezifo ezingamahlalakhona okungenzeka ukuthi bakhulise izimpawu zabo (i-asthmatic, i-allergen ... njll), ngakho-ke okwamanje sibhekene igciwane lokufa okuphezulu, ngaphandle kwalokhu, uMnyango Wezangaphandle ulungiselele impi yezincomo:
Kunconywa ukulandela imiyalo yeziphathimandla zaseChina, futhi ikakhulukazi:
- Zivikele emakhazeni, uvuse umoya ezindlini futhi wenze inhlanzeko efanele yomuntu siqu.
- Gwema imisebenzi eminingi ngangokunokwenzeka ezindaweni eziminyene
- Sebenzisa isifihla-buso uma kwenzeka uvakashela izindawo ezinabantu abaningi nezibhedlela, noma uma kwenzeka uthintana nabantu abagulayo noma izilwane zasendle. Amaski kufanele abe ukusetshenziswa okukodwa kuphela.
- Vala umlomo namakhala ngezicubu lapho uthimula
- Naka izimpawu ezifana nomkhuhlane noma ukukhwehlela okomile
- Gwema ukuxhumana nezinyoni
- Gwema ukuxhumana nezilwane zasendle noma emapulazini ngaphandle kokugqoka imaski evikelayo.
- Gwema ukudla inyama namaqanda okungaphekiwe ngokuphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Landela inqubekela phambili yeCoronavirus emhlabeni wonke ngesikhathi sangempela
Ungawabuka kanjani online amafilimu amahle kakhulu wemiklomelo yeGoya 2020
ISonos Port: Iletha i-AirPlay 2, i-Spotify Connect, nokuningi kunoma iyiphi idivayisi